စမတ်ဖုန်းများ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇွန်လ 23, 2015 မောင်းသူ 0
4.7-inch and 5.5-inch iPhone6 iPhone6 Plus, as rumored, Apple six generations usingalarge screen. It seems large-screen phone, the trend ah! But the screen is increased, it means that it is subject to accidental impact,... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Xiaomi Hongmi Note mobile phone（white）.The event starting today, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင် ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဥပဒေရေးရာအနက် processor ​​ကို Technology_Internet Intel က စီပီယူ HTC က HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Software များ device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု 64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ မိုဘိုင်းဖုန်း ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ Nokia က Samsung က
ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က OS ကို-STORE စမတ်ဖုန်းများ စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HD Graphics 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ Qualcomm မှ Technology_Internet Samsung က ဥပဒေရေးရာအနက် Intel က Intel က Server ကို Samsung ရဲ့ Galaxy နည်းပညာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Sony Ericsson က HTC က device ကိုမော်ဒယ် ပရိုဆက်ဆာ